Ukuhamba phambili kokuhlanganiswa kweCAD - Iindleko - ii-Geofumadas
Ukuncinci kancinci kokuhlanganiswa kweCAD - Iindleko
NgoFebruwari, 2009 AutoCAD-AutoDesk, Zobunjineli, IntelliCAD, Microstation-Bentley
Emva kokufa SAICIC, iiprogram ezininzi zaseMexico, zikhethe le ntengiso, ibe enye yeendawo zobunjineli ezazisungula okokuqala. Ndiyakhumbula ukuba ngamanye amaxesha ndizinike ixabiso lekhosi, kwaye kwakufuneka ukuba ndizame izicelo ezahlukeneyo (ezikhoyo ngaloo mihla), ezifana NewWall, Opus, Iqela kunye Neodata. Ukugqibela kwakubonakala kungcono kodwa kwakandikhathaza ukuba andinako ukusabalalisa kwilizwe lam ngenxa yokuba kwakufuneka iveki eMexico; Ngaphandle kokungabi namali, kwakubonakala kungenangqondo ukufunda ukusebenzisa inkqubo endiyifunayo ukuba ndiyisebenzise njani. Ngoku ngoku i-Opus iyandibulela, kungekudala yenza ingxolo eyaneleyo kwi-AdWords ukuba ndibethe ukuba ndihlaziye nawuphi na umhla wale ... kodwa ihlawulwe 😉
Okwangoku, ngokukhululekileyo sihlolisisa ibali elidala, elihle ukuba ezi nkqubo zenzile kwaye kutheni kubanjwe indleko kakhulu ukuhlanganiswa kwazo neCAD.
Inkampani yokwakha, olususa amaxwebhu ukusuka kwithenda ukuba imigangatho zokwakha 8 kwaye iiveki ezimbini ukuqulunqa isindululo yayo, uchitha iinjineli ezintathu ukubala izixa yokubhala, ukuchaza iindleko iyunithi tabs e Excel, eyiyona iindleko bahlule izinto nokwenza uqikelelo okulungile. Kodwa ukuba ubhido kanye zingeniswe bavumelekile imini enye ukuya reformulate isindululo esitsha, bekuya ngokuqinisekileyo babe nobunzima kakhulu ukuya mboniso ngaphandle kokuba amabi malunga eludinini mhlawumbi esiphoso.
Kule nkqubo, iiprogram ezinjengezo zikhankanywe ngasentla, bonke abantwana be-SAICIC benza okufanayo, ukudala izakhiwo zedatha kwiziphumo:
Emva koko, balungele ukwakhiwa kwamakhadi eendleko zeeyunithi ezisisiseko (siseko), ezidibeneyo kunye nezixhobo ezakhayo (Idibeneyo), ezi ziqokelelwe kwiingqungquthela zebhajethi (Imidlalo), kwaye ekugqibeleni zilungele ngokwemiqathango yesiphakamiso sezoqoqosho (Izahluko). Le ngcamango IMatrix indexed iyafana nayo yonke into eyenziwe, enye inyathelo eliphakanyisiweyo kumthi Iiprojekthi, isebe liye lakwazi ukuzivumelanisa izidingo ezikhulayo ezifana kwinkcazelo iimfuno factor kwezoqoqosho ezahlukeneyo ayahluka ilizwe bahlule kodwa ikwazile ukuba parameterize (kunokuba ngaphantsi) iindawo.
Ndiyakhumbula ukwenza oku kwiLotus 123, yayifa kodwa imfundo kakhulu ukuqonda i-continental drift, hehe, yomonde wam.
Njengenyathelo elilandelayo, iinkqubo ezihlangeneyo add-ons kwiindleko ezingundoqo iyunithi mnqongo wokulinganisela, uqikelelo ulawulo sokubuyisela emva ukwakhiwa, umnqongo ixesha isicwangciso indlela ebalulekileyo, ulawulo lwempahla kunye ezithile eqinqiweyo kulawulo lwezemali
Impumelelo engcono kakhulu enokuqwalaselwa ngokudibanisa imifanekiso, nangona ikhulile kakhulu, sinokuthetha ngezicelo ezimbini ezenziwe nguNeodata:
Ukubala kwamanani amaninzi
Nangona le fomu ibe yintlanzi ngokusetyenziswa kweempawu, inokuthi ithathelwe ingqiqo efanelekileyo ye-Bim (Ukwakhiwa kweeNkcukacha zoLwakhiwo) okwakusandul Inzuzo engcono kukuba uhlahlo lwabiwo-mali luya kugcinwa "lu-dynamic", okokuba xa utshintsha izicwangciso, utshintsho lohlahlo lwabiwo-mali luya kwenziwa xa kunjalo. Kwakulungile ukusebenzisa izicucu zensimbi eziza kusasa okanye emva koko ziya kuba yintloko yesakhiwo somakhi kunye nekhontrakthi yokwakha itsimbi.
Kwesinye iimodyuli ezibizwa ngokuthi "ukuthengiswa kwezindlu", i-Neodata idibanisa i-GIS yokuqala, apho ungapenda khona amaqashiso ngokubhekiselele kummandla wokuthengwa okanye uhlalutyo lwezoqoqosho.
Ndingathanda ukuthetha ngaphezulu, kodwa akukho nto engakumbi ukuyibona, kungekhona ukuba ayikho, kodwa ukuba ukusetyenziswa kwayo kuye kwaziwa. Ukufumanisa isizathu sokuba le nto ingazange ifumaneke phambili phambili, akusiyo isiphelo se-SIG ngamaphupha athile kunye nomtshato wayo ochanekileyo weCAD. Akunakukwazi ukuphika ukuba sisidingo esikhulu, ukuba neemarike ezininzi kwiCAD / CAM kunye neenkqubo ezithile zeendleko ze-AEC.
Ukukhangela ngenxa yesizathu, ndzi nga ujonge kuphela ntoni nanceba Capuchino yam kwakuthe kunye ukutshaya e C #, ndikhumbula sinazo ngaphezu Bayishiya kwangoko ebhodini iprojekthi mbono kule nkalo. kanti IntelliCAD kunye neDataCAD izame, sigqiba ekubeni ingxaki kukugcinwa kwezinto eziphuhliswayo ngenxa yokungazinzi komgangatho wentshukumo ebanzi esetyenziswa kakhulu (bayabiza amaninzi kwaye bahlala ixesha elifutshane). Nangona abaninzi bebona ukugqithisa okuninzi kunamandla, i-dwg iyayaziwa kwaye i-dxf yinto ephilayo apho wonke umntu atshabalalisa inzala yokungatshintshiyo.
Ngaphandle kokuba oku litshintsha, eli phupha iya kuhlala kuhlukunyezwa ezindihleleyo Ubungakanani ihambe, owathi nangona endala Eagle Point kunye nasezandleni AutoDesk, ifumaneka kuphela ukuya United States. Kubalulekile ukwazi ukuba eminye imisebenzi Ubungakanani isuka zinxulunyaniswe kwi Civil 3D, kodwa ndibonile kangako ukuba iphunyezwe.
Siyathemba ukuba ukuhlanganiswa komqathango weBim oza ngokuza kwi-GIS kunye msebenzi ohlangeneyo I-AutoDesk - iBentley inokunika uzinzo olongezelelweyo kwimigangatho; oku kufuneka kukhuthaze ukuphuhliswa kwezicelo ezingcono kule ndawo ... ezizinzileyo.
AutoDesk Bentley Systems 3D civil Dgn Dwg
Post edlulileyo«Edlulileyo Izikhokelo zeMagazini ngoku ngeSpanish
Post Next Imephu yegama lakho lokugqibelaOkulandelayo "
Iimpendulo ze-3 "Ukuhamba kancane kwe-CAD ukuhlanganiswa - iindleko"
I-Neodata ibandakanya uthotho lweenkqubo zobunjineli bokwakha. Ngeendleko zeyunithi, ulawulo lwee-payroll (iirhafu), uqikelelo, uphuhliso lwezindlu, uluhlu, njl.
Ukugqiba ulwazi kunye neenguqulelo zeememo zingalandwa kwikhasi le-Neodata.
KIKA LOPEZ PEREZ uthi:
Kulungile ME ULWAZI wakho olihlwempu UBONAKALA porfis iBhunga City Brisbane BENZE INTO MALUNGA OKO KUTHETHWA, INDLELA ukusebenzisa OKO YAKHO Screen HOME LE IPROGRAM ikakhulu UKUBA BASEBENZE
Isivumelwano esipheleleyo, ifomathi yeDWG-ngaphandle kokucaciswa okuvulekileyo kunye nokutshintsha inguqulelo nganye entsha-i-brake kwizinto ezintsha kunye nokuqhubela phambili kwenkqubo yokuyila imifanekiso.
Njengoko kwenzeke ngeofisi, ndiyathemba ukuba ulawulo lukawonkewonke lufuna iifomati ezivulekileyo nezingavumelekanga.